Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Hoggaamiyaha Xisbiga Gurmad – – AfmoNews
Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Hoggaamiyaha Xisbiga Gurmad –
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda JFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa sii wada kulammada wadatashi ee uu la leeyahay siyaasiyiinta iyo qeybaha bulshada, si loo helo aragti mideysan oo ku addan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho daahfuran oo dhinacyada oo dhan ku wada qanacsan yihiin.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Hoggaamiyaha Xisbiga Gurmad Dr.Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo ay ka wada hadleen xallinta tabashooyinka arrimaha doorashada iyo dhowrista xasilloonida dalka.
“Maanta waxaan xafiiskeyga ku qaabilay siyaasiga Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka, nabadgelyada iyo sidii dalka horumarkiisa wadajir loogu sii amba qaadi lahaa, waxaana is dhaafsanay tallooyin wax dhisaya, xafiiskeyguna waa furan yahay cid walba oo tabasho qabta”.
Eng. Rooble ayaa u caddeeyey bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta in dalka ay ka qabsoomi doonto doorasho ku dhacda waqtigeeda, xukuumaddiisuna ay diyaar u tahay wax walba tabasho ah in wada xaajood lagu dhammeeyo.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xusay in nabadgelyada dalku ay tahay masuuliyad guud oo wada saaran siyaasi iyo shacab, loona baahan yahay in la wada ilaaliyo.